जवरजस्ती करणी मुद्दामा पूर्व सभामुख महरालाई सफाइ – Gaule Media ::
Home/समाचार/जवरजस्ती करणी मुद्दामा पूर्व सभामुख महरालाई सफाइ
जवरजस्ती करणी मुद्दामा पूर्व सभामुख महरालाई सफाइ
Gaule media ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार १४:२९
काठमाण्डौ,५ फागुन ।
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले जवरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासबाट सोमबार आएको फैसलामा महराले सफाइ पाएका हुन्। आइतबार नै फैसला हुने भनिएपनि हेर्दाहेर्दै राखिएको मुद्दाको सोमबार गरिएको फैसला महराको पक्षमा आएको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतवारै दुवै पक्षको बहस सकिएको थियो। तर फैसलाका लागि समय अपुग भएको भन्दै महराविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा महरा पुर्पक्षका लागि हाल डिल्ली बजार कारागारमा थिए। भिडियो महराको पक्षमा अधिवक्ताहरू लवप्रसाद मैनाली, रमणकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, डा. भीमार्जून आचार्य र सबिता भण्डारी बरालले बहस गरेका थिए। त्यसैगरि अधिवक्ताहरू सुशील सापकोटा, मुरारी सापकोटा, डा. दिनमणि पोखरेलले पनि महराको पक्षबाट बहस गरे।
सरकारी वकिलहरुले बहस गरिसकेपछि महराको पक्षबाट बहस भएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि असोज १२ गते बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग महरामाथि लागेको थियो।
१८ पुष २०७७, शनिबार २१:२६
त्रिवेणी इन्टरनेशनल क्याम्पसको अध्यक्षमा भट्टराई
१० बैशाख २०७७, बुधबार ०५:५१
भारतसँग सीमा जोडिएको कैलालीका क्षेत्र पूर्णरुपमा शील
३ मंसिर २०७७, बुधबार ०७:४५
सूर्यको पूजा गरिने पर्व छठ आजबाट सुरू
१८ पुष २०७५, बुधबार ०८:५५
प्रधानन्यायाधीश जबराद्धारा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण